बिहे गराउने पण्डितले नै बेहुली भगाईदिएपछी |
बिहे गराउने पण्डितले नै बेहुली भगाईदिएपछी
August 19, 2021 August 19, 2021 adminLeaveaComment on बिहे गराउने पण्डितले नै बेहुली भगाईदिएपछी
संसारमा कहिले काँही अनौठो घटना हुने गर्छन जसले मानिसलाई आश्चर्य बनाउँछ । अर्काको विवाह गराउन गएका पण्डितले नै बेहुली भगाइदिए भने के होला ? तपाईले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ ?वास्तवमा यस्तै घटनाले सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको छ । यो घटना नेपालमा भने भएको होइन । भारतको मध्यप्रदेशमा भएको यो घटनाले सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको छ ।एक जोडीको बिहे गराइदिएका पण्डितले नै केटी लिएर भागेका छन् । २१ वर्षकी रीना बाइ नामकी केटी आफ्नो बिहे गराइदिने पण्डितसँग भागेकी हुन् ।
मध्यप्रदेशको विदिशा जिल्लामा रीनाले एक युवकसँग बिहे गर्न लागेकी थिइन् । त्यसको एक हप्तापछि उनी घरबाट गहना र पैसा लिएर आफ्नै बिहे गराइदिने विनोद महाराज नाम गरेका पण्डितसँग भागेकी हुन् ।बिहेपछि खुसीसाथ आफ्नो श्रीमानको घर गएकी रीना केही दिनमा आफ्नो माइत फर्केकी थिइन् ।माइतबाट उनी घर फर्किनुको सट्टा पण्डितसँग भागेकी थिइन् । स्थानीय प्रहरी प्रशासनले पण्डित र युवतीको पहिल्यैदेखि चक्कर चलेको हुनसक्ने अनुमान गरेको छ ।
यो पनि:गर्लफ्रेण्डलाई कारको छतमा बाँधेर सहर घुमाए।गर्लफ्रेण्डको साथमा एक व्यक्तिले यस्तो काम गरे कि देख्नेहरु दंग परे ।ट्रस्ट टेस्ट स्टन्टको क्रममा उनले आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई कारको छतमा बाँधेर सहर घुमाए ।यस क्रममा सयौं मानिसहरुले उनीहरुलाई हेरिरहे । घटना रुसको हो । सामाजिक संजाल इन्फ्लुएन्सर सर्गेइ कोसेन्कोले यस्तो हर्कत गरे कि उनको भिडियो भाइरल भयो ।भिडियोमा सर्गेइ आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई कारको छतमा बाँधेर सहरमा निस्किए । यस क्रममा सर्गेइको एउटा हात हथकडीले गर्लफ्रेण्डको हातसँग बाँधिएको थियो ।उनले गर्लफ्रेण्डलाई छतमा डोरी र टेपले बाँधेका थिए । कार सर्गेइले चलाइरहेका थिए ।उनले मस्कोको सडकमा लग्जरी बेन्टली कार दौडाइरहेका थिए । उनले एउटा हात बाहिर निकालेर गर्लफ्रेण्डको हात समातेका थिए ।
सर्गेइ र उनकी गर्लफ्रेण्डले आफूहरुले ट्रस्ट टेस्ट गरिराख्ने र यो त्यसैमध्येको एक भएको बताएका छन् । रिपोर्टका अनुसार यो हर्कतको लागि पुलिसले सर्गेइमाथि भारी जरिवाना लगाएको छ ।सामाजिक संजालमा पोस्ट गरिएको भिडियोको आधारमा पुलिसले थप कारवाही अगाडि बढाएको छ । यो भिडियोका कारण सर्गेइको आलोचना भइरहेको छ । ट्रोल भएपछि उनले यसको लागि माफी मागेका छन् ।
एकाबिहानै WHO ले दियो विश्वलाई चकित गराउने खबर।मास्क प्रयोग गर्नुभएको छ भने एकचोटी ढिला नहुँदै पढ्नुहोला।
१४ बर्षे विद्यार्थीसँग २२ बर्षे शिक्षिका फरार!
ललितपुरदेखी आयो अत्यन्तै दुखद खबर,सुन्दा पनि मन थाम्न गाह्रो हुन्छ
कोरोना पुष्टी भएका २०० जना सम्पर्कबिहिन।भर्खर जारी भयो यस्तो सुचना,सचेत रहनुहोस यी ठाउका बासिन्दाहरु
भर्खरै काठमाडौं उपत्यकाबाट आयो डर लाग्दो खबर